Vaovao - Mbola mampiasa savony landihazo hitsaboana ratra? Huai'an ZTE pharmaceutika "Nanambara ny fenitra momba ny lambam-pandihizana landihazo ho anao"
Amin'ny maha-entana ilaina ao an-trano azy dia tena ilaina ampiasaina ny savony landihazo, na fitaovana zavakanto izy io amin'ny fanitsiana ny antsipiriany mandritra ny makiazy, na fitaovana fanampiana ho an'ny famonoana otrikaina sy fanosehana menaka manitra mandritra ny fitsaboana ny ratra. Indrindra indrindra rehefa miatrika ratra na olan'ny hoditra eczema ianao, mba hialana amin'ny aretina faharoa dia matetika no manala fanafody. Raha ny marina dia tsy ny savony landihazo rehetra no mety amin'ny fitsaboana ratra. Raha tsy voafantina tsara ny savony landihazo dia tsy ny areti-mandringana faharoa ihany no tsy azo sorohina, fa mety hiteraka fahavoazana koa
Ireo mpamatsy eo an-toerana ny fitaovam-pitsaboana matihanina sy ny vokatra famonoana otrikaretina dia nilaza fa tsy ny savony landihazo rehetra no azo ampiasaina amin'ny tanjona ara-pitsaboana. Ny savony landihazo ara-pahasalamana dia tsy maintsy asiana marika hoe "steril" sy "sterilized" alohan'ny hampiasana azy ireo amin'ny famonoana otrikaretina amin'ny ratra. Na dia kely aza ny swab landihazo dia tsara na ratsy ihany koa ny haitao sy ny teknolojia fanodinana azy. Izany indrindra dia noho io fahatakarana siantifika io fa ny lambam-pandriana vita amin'ny landihazo Huai'an ZTE dia mety ho lasa marika fehin-kibo vita amin'ny landy.
Fitsaboana fanamafisam-pahaizana matihanina: fiantohana ny fiantohana dia miantoka fiarovana bebe kokoa ny atrikasa sy ozinina Huai'an ZTE pharmaceutika dia namboarina mifanaraka amin'ny fenitry ny fitsaboana nasionaly GMP mba hahazoana antoka fa mifanaraka amin'ny fenitra ara-pitsaboana ny vokatra vita rehetra. Huai'an ZTE savony landihazo fitsaboana dia tsy misy ankanavaka. Huai'an ZTE savony landihazo ara-pahasalamana dia tsaboina amin'ny teknolojia fanamafisam-peo etilena oksidaina be mpampiasa amin'ny fitaovam-pitsaboana hahazoana antoka fa voatahiry aseptika alohan'ny hampiasana azy ireo. Izy ireo dia ampiharina mifanaraka amin'ny fepetra ara-teknika napetraky ny fisoratana anarana ny landihazo vita amin'ny landihazo. Mba hisorohana ny aretina ratra faharoa.
Ny savony landihazo marobe amin'izao fotoana izao eny an-tsena dia tsy voamarika hoe "steril", noho izany karazana savony landihazo izany dia tsy mety amin'ny fitsaboana ratra, ary ny fampiasa ao an-trano dia tokony ho voafantina tsara.
Landihazo mitroka mahazatra: malefaka, ahazoana aina ary hydrophilic kokoa
Raha heverina fa ny savony landihazo dia azo ampiasaina hanasitranana ratra amin'ny fiainam-pianakaviana, ny savony landihazo tsy refesi-kena ataon'ny Huai'an ZTE pharmaceut dia mitaky fatratra araka ny fenitra ara-pitsaboana hatrany am-piandohana, tsy vitan'ny fampiasana teknolojia fanamahana ny éthiléthide oxide amin'ny fizotry ny famokarana, fa koa amin'ny ny fisafidianana fitaovana. Misafidiana landihazo mpitroka ara-pahasalamana ho fitaovana lehibe hampitomboana ny fampiononana amin'ny fampiasana. Ny landihazo mpitroka ara-pahasalamana dia antsoina koa hoe "landy rongony". Aorian'ny fizotry ny fihenan'ny toe-javatra dia tsy misy tavy intsony ny etona ary manana hydrophilicity tsara kokoa. Mety kokoa raha mamafa ny ranon-dronono na mamono otrikaretina. Ho fanampin'izany, landihazo landihazo entin'ny mpitsabo dia malefaka sy mahia, tsy volo fotsy kokoa, fa malefaka ihany koa. Ny loha landihazo elastika dia afaka hikarakara tsara kokoa ny hoditra marefo.
Ny savony landihazo dia be mpampiasa, ary maro ny olona tsy miraharaha ny fiarovana azy ireo. Mampahatsiahy ny rehetra ny Huai'an ZTE pharmaceutika: raha ampiasaina amin'ny fitsaboana ratra ny lamba landihazo ao an-trano dia tsy maintsy misafidy landy vita amin'ny landihazo ianao ary mila mitandrina amin'ny famehezana azy ireo ao anaty fitehirizana isan'andro mba hialana amin'ny fandotoana ireo landihazo.
Huaian Zhongxing Pharmaceutical Technology Co., Ltd. dia manolo-tena amin'ny fananganana sehatra famatsiana matihanina amin'ny sehatry ny fitsaboana sy ny fahasalamana miaraka amin'ny vokatra tena izy sy ny vidiny ambany, ary manome voninahitra lehibe anay hanome ny herinay amin'ny fahasalaman'ny olombelona. Miorina amin'ny faneken'ny mpanjifa antsika amin'ny ho avy, dia handray ny andraikitray hitarika ny indostria ho amin'ny fampandrosoana avo kokoa koa izahay, ary hiara-manangana gadona famokarana indostrialy feno sy mitarika mba hanomezana fahafaham-po mialoha ny fitsaboana ara-pitsaboana.
Pad mpitsabo mpanampy, Saron-tava medikaly fanary azo ampiasaina, Saron-tava Antiviral, Saron-tava miaina, Landihazo fitsaboana, Swab vita amin'ny landihazo voadio,